हाम्रो बारेमा - गुआंगज़ौ एशियाप्रिन्ट औद्योगिक कं, लिमिटेड
२०१ 2016 मा स्थापित, गुआंगज़ौ एशियाप्रिन्ट इन्डस्ट्रिय्ल कं, लिमिटेड तातो प्रेस उच्च बनाने की प्रविधि को नेता बनिरहेको छ। हामी गर्मी प्रेस स्थानान्तरण मेशिन, उच्च बनाने की प्रक्रिया प्रिन्टिंग मशीन, डीटीएफ प्रिन्टिंग मशीन, फ्यूजिंग मेशिन, एम्बोसिंग मेशिन, ड्रायर, उच्च बनाने की क्रिया कागज, मसी इ हाम्रो ग्राहकहरुको मापदण्डहरु।
हामी बुझ्दछौं विस्तृत सेवा एकदम महत्त्वपूर्ण छ। ग्राहकलाई सल्लाह दिन वा उसलाई बजेटमा सही मेशिनहरू छनौट गर्न मद्दत पुर्‍याइएको छ। अनलाइन लाई प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्न सकिन्छ र कर्मचारी तपाईलाई मद्दत गर्न अत्यन्त खुशी हुनेछन्। ईन्जिनियरहरू विदेशमा सेवा मेसिनरीमा उपलब्ध छन्। हामी सीई लाई प्रमाणित गर्छौं।
हामी साना आदेशहरू, OEM र ODM अर्डर स्वीकार गर्दछौं। अनुकूलित ताप प्रेस मेशिनहरु हाम्रो अनुभवी इञ्जिनियरहरु द्वारा डिजाइन गर्न खुशी हुनेछ।
हामी तपाइँकाे प्रतिक्रियाकाे प्रतिक्षामा हुनेछाैँ!
गुआंगज़ौ एशियाप्रिन्ट इन्डस्ट्रियल कं, लिमिटेड गर्मी प्रेस मेशिन, हीट ट्रान्सफर मेशिन, रोल टु रिट तातो प्रेस मेशिन, उच्च बनाने की मशीन, ठूलो ढाँचा तातो प्रेस मेशिन, उन्नत कपडाका लागि फ्यूजिंग मेशिनमा केन्द्रित थियो। १ ++ भन्दा धेरै बर्षको अनुभवको साथ हामी नवीन औद्योगिक मेशिनरी डिजाइन, निर्माण, स्थापना र मर्मत गर्छौं। हामी तातो प्रेस उपकरणहरू र पूर्ण उत्पादन लाइनहरू निर्माण गर्दछौं।
एशिया प्रिन्ट गर्मी प्रेस क्यालेन्डरहरू अनुप्रयोगको आधारमा विभिन्न ड्रम आकार र फरक कामका चौडाइहरू उपलब्ध छन्। मेशिनहरू र लाइनहरू स्ट्यान्डराइज्ड वा पूरा अनुकूलन गरिएको हुनसक्दछ।
हाम्रो तातो प्रेस मेशिनको यो विस्तृत दायरा फेसन, निरन्तर कपडा, गैर बुनेर, खेल पोशाक, जर्सी, झोला, कार्पेट माउस प्याड र गिलास आदिको निरन्तर मुद्रणको लागि डिजाइन गरिएको हो।
हाम्रो सबै गर्मी प्रेस मेसिनको यूरोप मानक सीई प्रमाणपत्र छ, एसजीएस रिपोर्ट।
हामी अलीबाबाबाट भेला गरिएको रिपोर्ट पाएका छौं, र मूल्यांकन गरिएको आपूर्तिकर्ताको रूपमा स्वीकृत हुनेछौं।
दशकौं भन्दा बढी, विश्वमा प्रत्येक डिलर वा वितरकको लागि धन्यवाद, हामीसँग सारांश उत्पादनहरू छन् जुन केहि बजार वा केही देशमा लोकप्रिय छ। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, मध्य पूर्व क्षेत्र डीलरहरू केहि देशमा फेला पार्न सकिन्छ, जस्तै यूएसए, मेक्सिको, थाईल्यान्ड, ईरान।
हाम्रो फ्याक्ट्री OEM सेवाबाट लाभ कमाईएका धेरै जसो ग्राहकहरूले उनीहरूको डिजाइन प्रवृत्ति सिर्जना गर्छन् र फेला पार्छन्। भन्न खोजेको कुरा हो, हामी र हाम्रो डिजाइनर वर्तमान डिजाइन प्रवृत्तिमा बाँधिएका छौं र प्रत्येक देशका लागि उपयुक्त उपयुक्त मोडलको डेलिभर गर्न हाम्रो रचनात्मक विचारहरू बढाउछौं।
हामी हाम्रा ग्राहकहरूलाई भेट्न र हाम्रा ग्राहकहरूको प्रदर्शन अझ राम्रो बनाउनको लागि हाम्रा उत्पादनहरू सुधार गर्न जारी राख्न सक्ने तरिकाहरूको बारेमा सुझावहरू सुन्ने आशा गर्दछौं।
हामी वितरणको माध्यम बाट उत्पादन विकास को शुरू देखि र जब सम्म कि उत्पादन हाम्रो ग्राहकहरु को सेवा प्रदान गरीरहेको छ को लागी हामी हाम्रो विचार मा यो विचार अग्रणी राख्छौं।
तपाईंको शब्दले महत्व राख्दछ! तपाईंको प्रतिक्रिया महत्त्वपूर्ण छ!
हामी व्यक्तिहरूको समूह हो तपाईको पूर्ण खरीद प्रक्रियाको प्रयोगका लागि। तपाईं आश्वस्त हुन सक्नुहुन्छ कि हाम्रो प्रतिबद्धता केवल उपकरण बेच्ने मात्र होईन तर उपकरण स्थापना गर्न, स्टाफलाई तालिम दिन र हाम्रा ग्राहकहरूलाई लगातार विश्वव्यापी रूपमा शिक्षा दिनको लागि हो।
हाम्रो वारंटीमा सबै सामान्य भागहरूमा १ बर्ष समावेश छ।